APARTMENT RENT (ID-236) အား ရန်ကင်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
APARTMENT RENT (ID-236)
Near Moe Kaung Road in Yankin Township, 900 sqft living area apartment for rent. Hall with attic. The monthly rent price of apartment is - 15 Lakhs (Nego).
မိုးကောင်းလမ်းအနီး ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော ငှားရန် ၉၀၀ စတုရန်းပေတိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအတွင်း ထပ်ခိုးပါရှိပြီး အခန်းများဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။ လစဉ်ငှားရမ်းခ- သိန်း ၂၀ (ညှိနှိုင်း)
အမည်: APARTMENT RENT (ID-236)